Alshabaab;”Waxaan raadineynay General Galaal muddo 13 sano ah” – – AfmoNews
Alshabaab;”Waxaan raadineynay General Galaal muddo 13 sano ah” –
Ururka Alshabaab oo sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkii shalay lagu qaaday Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay war ay soo saaren ku sheegeen in muddo 13 sano ay raadinayeen General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa dadkii ku dhintey weerarkii Hotel Afrik.
Dagaalamayaasha Alshabaab oo sheegay in weerarkan ay ku dileen illaa 23 ruux kuna dhaawacmeen 40 kale ayaa waxa ay weerarka ku tilmaameen in bartilmaameedkoodu uu ahaa General Galaal.
“Galaal ayaa muddo dheer waxaa uu ahaa nin u heellan loona soo carbiyay la dagaalanka ku dhaqanka Shareecada Islaamka, waxaa uu aqoontiisa iyo khibradiisa dhanka sirdoonka ciidamada ah u adeegsan jiray inuu kula dagaalamo Mujaahidiinta. Waxaa uu ku lug lahaa hagardaamooyin dhawr ah oo ay gaaladu ku dileen rag Mujaahidiin ah. Waxaa raggaas kamid ahaa Macalim Aadan Xaashi Cayrow, kaas oo ku shahiiday duqayn ay Maraykanku ka geysteen Magaalada Dhuusamareeb bishii May 2008.”ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Alshabaab
Sidoo kale dagaalamayaasha Alshabaab ayaa ku tilmaamay General Galaal inuu ku lug laha abaabulka dagaallo ka dhan ah ALshabaab.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabelle oo lagu soo dhoweeyay Dhuusamareeb